Guddiga doorashooyinka Jubbaland oo mudeeyay in 19-ka Agoosto ay dhici doonto doorashada madaxweynaha - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGuddiga doorashooyinka Jubbaland oo mudeeyay in 19-ka Agoosto ay dhici doonto doorashada madaxweynaha
August 14, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Guddiga doorashooyinka Jubbaland. [Sawir Hore]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta oo Arbaco ah soo saaray jadwalka doorashooyinka madaxweynaha.
19-ka bishaan Agoosto ayay dhici doontaa doorashada madaxweynaha Jubbaland, sida uu muujinayo jadwalka ay sii daayeen guddiga doorashooyinka.
Talaadadii, xubnaha cusub ee baarlamaanka Jubbaland ayaa la dhaariyay waxayna guddoomiye kumeelgaar ah u doorteen Shiikh Cabdi Yuusuf Cali oo ah qofka ugu da’a weyn.
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ayaa la qaban doonaa 17-ka Agoosto, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinku.
Madaxweynaha xafiiska jooga Axmed Maxamed islaam oo loo yaqaan Axmed Madoobe iyo musharixiin kale ayaa ku loolamaya doorashada.